Batariga - Androidsis | Androidsis
Ma rabtaa inaad wax walba ka ogaatid batteriga taleefankaaga Android? Durbaannada ugu fiican tabaha? Mise xal u helista dhibaatooyinka leh? Qeybtaan batteriga waxaad ka heli doontaa dhammaan wararka, talooyinka, casharrada iyo arrimaha hadda ku saabsan baytariyada ku jira Android. Si aad uga warqabto dariiqooyinka lagu hagaajin karo ismaamulkooda ama lagu xallin karo dhibaatooyinka iyaga ka jira.
Qeybtaan waxaan sidoo kale ka helnaa dib u eegisyo ku saabsan moodallo kala duwan oo baytariyada la qaadan karo ah oo aad iibsan karto sidaasna ay suurtogal u tahay in taleefankaaga lagaa qaado mar walba meel kasta oo aad joogto.
Waa wax ka badan sidii caadiga ahayd si loo arko sida taleefannadeenna casriga ahi u kululaato xagaaga, in ka badan sidii caadiga ahayd. Si kastaba ha noqotee…
Maalmahan markaan jabinayno diiwaanka heerkulka hoose, waa inaan maskaxda ku haynaa in batteriga ...
by Nerea Pereira samee Bilaha 12 .
Waad ku mahadsan tahay amarka degdegga ah, waayo-aragnimada taleefannada gacanta ayaa si weyn u fiicnaaday. Waxaan ku noolnahay adduun mid walba ...
Google ayaa lagula taliyay muddo kadib inay adeegsato codsiyada kuwa soo saaray, ee shaqeeya ...
Telefoonadu waxay u muuqdaan inay daadinayaan batterigooda maxaa yeelay mararka qaarkood waxay ku leeyihiin dhowr codsi xagga dambe oo awood u leh ing.
Wareegyada amraya: Maxay yihiin iyo imisa ayaa taleefankaaga Android uu leeyahay?
Batarigu waa shay ay dadka isticmaala si joogto ah uga walwalaan Android. Sababtaas awgeed, waxaan si joogto ah u raadineynaa ...
Telefoonada Huawei ee cusbooneysiiyay ama leh Android Pie asal ahaan, waxay la socdaan dhowr ikhtiyaar oo maareyn ah ...
Waxaan markale go'aansaday inaan si rasmi ah u siiyo arjiga rasmiga ah ee Facebook-ga Android ah markan ...
Qiyaasta batteriga taleefankayaga Android waxaa had iyo jeer ka jira khuraafaad badan iyo xan. Laga soo bilaabo sida ay ugu habboon tahay ...
Isticmaalayaasha Android waxay aad ugu mashquulsan yihiin baytariga. Sidaa darteed, si joogto ah ayaa loo raadiyaa ama loo ...
by Eder Ferreño samee 3 sano .
Khadka wireless-ka ayaa ku sii kordhayay joogitaanka Android. Waxaan dhawaan kaala hadalnay howlaheeda, intaa waxaa sii dheer inaan xusnay qaar ...